Official ထွက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 5T Sandstone White Limited Edition! – AsiaApps
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က Oneplus အနေနဲ့ YouTube Official Channel မှာ OnePlus 5T Sandstone White Limited Edition အတွက် Teaser Video လေးတစ်ခု တင်ခဲ့ပါတယ်။ လန်ဒန်မှာက မသိတဲ့လူစိမ်းတွေကို သေတ္တာလေးပေးပြီး လိုက်စမ်းခိုင်းတဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်။
OnePlus 5T Sandstone White Limited Edition ဟာ Official ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့မှသာ စတင်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်နေ့မှာရောင်းချမယ့် Sandstone White Limited Edition ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလက Star Wars : The Last Jedi Logo နဲ့ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Star Wars Limited Edition နဲ့ အနည်းငယ်ဆင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ ဖုန်းရဲ့ အရောင်အသွေးပိုင်းကိုပါ။
Sandstone edition မှာတော့ RAM 8GB နဲ့ Memory space 128GB version နှစ်မျိုးတည်းကိုသာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Midnight Black edition တုန်းကလို RAM 6GB နဲ့ Memory space 64GB version ထွက်ရှိဖို့တော့အလားအလာ မရှိသေးဘူးဗျ။ Dual camera ဖြစ်ပြီး 16 MP + 20 MP ပါဝင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ portrait အသုံးပြုပြီးတော့လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် ဖုန်းအားကိုလည်း အချိန်ခဏအတွင်းမှာ 100% အထိရောက်အောင် သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကုန်အသုံးပြုရမယ့် ဘက်ထရီကို အချိန် တစ်နာရီခွဲသာအားသွင်းရမှာကြောင့် ညတစ်ညလုံးအားသွင်းထား စရာမလိုတော့ပါဘူး။ Oneplus အနေနဲ့ 5T Sandstone White Limited Edition ကို USD 559 နဲ့ရောင်းချသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်းကျက်သရေရှိ၊ Camera ပိုင်းကလည်းမဆိုး၊ ဘက်ထရီကိုလည်းအချိန်ခဏတာအတွင်းမှာ သွင်းနိုင်တာကြောင့် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ Smartphone တွေထဲကတစ်ခုလို့ပဲဆိုရမှာပါ။
So clean, so fresh. Iconic OnePlus Sandstone combined with sleek aluminum foraone ofakind grip. Get ready for the limited drop on Jan 9! https://t.co/Ao3Wadp6oD pic.twitter.com/sNeF9J0YZM
— OnePlus (@oneplus) January 8, 2018
Source : Oneplus 5T Sandstone White Limited Edition
New Edition, Oneplus, Smartphone